Etu esi wụnye Linux site na USB pendrive | Site na Linux
Etu esi wụnye Linux site na mkpisi USB
A na-eji ntuziaka a iji wụnye distro ọ bụla site na USB. Na mgbakwunye, ọ bara uru karịsịa maka ndị nwere netwọkụ ma yabụ enweghị ike iji LiveCD wụnye Linux.
Ihe anyị ga - eme bụ iji obere mmemme a na - akpọ UNetBootin, nke nwere nsụgharị maka Linux na Windows.
Download ihe onyogho ndi ISO nke ihe ahoro na ajuju.
Budata UNetBootin. Na Ubuntu, ọ dị mfe ma ọ bụrụ na ị wụnye ya na iji Synaptic.
Gbaa UNetBootin site na Ngwa> Ngwaọrụ Sistemụ.
Họrọ onyonyo ISO nke ebudatara na nzọụkwụ 1 dị ka isi.
Họrọ USB mbanye dị ka ebe
Nabata ma chere ka ọ gwụ (ọ nwere ike were obere nkeji)
Malitegharịa ekwentị ahụ na kọmputa, hazi BIOS iji buut si USB.
N'ụzọ dị otú a, ọbụghị naanị na ịchekwa CD / DVD na a gaara amanye gị ọkụ tupu, mana ịnwere ike ịnwale sistemụ arụmọrụ niile na-enweghị ihichapụ iota nke data echekwara na kọmputa gị. Ghara ikwu nke ahụ na-arụ ọrụ ọtụtụ ihe ngwa ngwa na ọ bụrụ na anyị esi na sistemụ ahụ bido LiveCD / DVD.
Iji weghachite USB gị, A na-atụ aro ka ịkpụzi ya, mana ọ bụghị ihe achọrọ, nhichapụ faịlụ niile nke UNetBootin depụtaghachiri ezuola. 🙂
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Faịlụ FileLet jiri » Etu esi wụnye Linux site na mkpisi USB
Obere nsogbu, emere m ihe niile dị n'elu na-anwa ịwụnye Kubuntu 12.10 na eriri USB. Ọ gwara m na ọ dị irè. Ma mgbe m gbanye pc m ga-enweta njehie buut Al .iso m kwuchara md5 nchikota. Na BIOS ka ahazilarị buut eriri. Ma mgbe ọ bụla m na-agbalị, m ga-esi buut njehie.
Agbalịrị m ịmalite ubuntu na eriri ma ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ.
Zaghachi Andres Westra Ureña
Nụrụ vidiyo ọ bụla ị nwere ike ịhapụ?
Enwerem fedora na disk ma amaghi m na m nwere ike iji ya tinye ya na usb
Enwetara m njehie mgbe ịwụnye .. ọ na-ekwu "oyiyi efu ma ọ bụ nke rụrụ arụ" ma ọ bụ ubuntu m chọrọ ịwụnye ... enyemaka ọ bụla? na m ga-eme?
Zaghachi Edgar Amarilla
Ọ na-eme kpọmkwem otu ihe ahụ. n'oge m na-eke bootable USB na programmụ ọzọ (lili) iji hụ ma ọ dị mma. Enwere ike mmadụ ịgwa m ihe kpatara nke a ma ọ bụ otu esi edozi ya, ọ bụrụ na Lili emeghị?
Ọ na-emekwa m.
ahhhh ukwu! Nye ọtụtụ ekele !!! Cheers!
Zaghachi Juan Pablo Mayoral
Zọ kachasị mfe iji unetbootin bụ ibudata faịlụ ISO nke distro ịchọrọ iji "n'aka". Nke ahụ bụ, gaa na peeji nke Linux Mint, budata ISO kachasị amasị gị na, ozugbo ọ gwụchara ya, jiri Unetbootin mepụta Live USB site na faịlụ ISO ahụ ibudatara na mbụ.
Nke ahụ dị mfe.
Ndewo, Achọrọ m ịwụnye Linux mint 13 site na pendrive mana nkesa anaghị apụta na enweghị usoro ...
unetbootin adaala ogologo oge: S
Lubuntu bụ nnukwu distro!
O doro anya na ị ga-adị ukwuu.
Daalụ! Gbazie !. 🙂
Aga m eji Debian nwaa ya, ọ dị mma. Site n'ụzọ, nzọụkwụ 5 ezighi ezi, ebudatara ihe oyiyi ahụ na nzọụkwụ 1, ọ bụghị na 2. Karịa ihe ọ bụla, n'ihi na ma eleghị anya, e nwere ụfọdụ ndị ọhụrụ na-agba ara na ndị minutiae a.
Ikenna Ojukwu dijo
Hey, gịnị ma ọ bụrụ na m chọrọ ihichapụ faịlụ niile ma hapụ Linux?
Echefula na pendrive ị ga-Ọkpụkpọ dị ka FAT32 ma ọ bụrụ na ị na-ahapụ ya dị ka NTFS ọ naghị arụ ọrụ maka gị
Eziokwu bu na amaghi m ihe kpatara i ji enweta njehie a.
Banyere nke ọzọ, echere m na ozi ị nwetara mgbe ịpụ na Lubuntu bụ ihe nkịtị, n'ihi na ọ na-eche na ị na-eji CD dị ka LiveCD na ọ bụghị pendrive. Ihe ị ga - eme bụ wepu pendrive na pịa tinye.
hi, achọrọ m obere enyemaka, agbalịrị m unetbootin kemgbe ubuntu 12.04 iji hụ ihe lubuntu dị. Enwere m mmasị na ya ma gbalịa imezue nwụnye ahụ, mana enwere m ọtụtụ nkebi na diski m, yabụ enweghị m ike, ma ugbu a anaghị ekwe ka m bido ubuntu ọ gwara m na m ga-ebido kernel tupu, enwere m ike ịbanye n'ime lubuntu ule, nke ọ na-adịghị m nwere ike ime ihe ọ bụla.
Enwere m olileanya na ị nwere ike inyere m aka
Aghọtaghị m ihe ọ bụla Juan! Bido nkpuru? Kedu ihe bụ ndudue nke na-akpali gị? Ke idaha ewe? Zụlite nsogbu ahụ ka mma iji hụ ma anyị nwere ike inye gị aka.
Ndewo, daalụ nke ukwuu maka ụdị nzaghachi a.
Nke bụ eziokwu bụ na m gbalịrị unetbootin na lunubu, na mgbe m malitegharịrị usoro iji banye ubuntu, ọ gaghị ekwe ka m banye na ya, ọ na-ekwu: njehie "ịkwesịrị ibu ụzọ kụọ kernel ahụ".
Ihe ọzọ nke nwekwara ike ịdị mkpa bụ na mgbe m na-apụ lubuntu ọ na-agwa m "biko wepu mgbasa ozi ntinye ma mechie tray (ọ bụrụ na ọ bụla) wee pịa tinye", na amaghị m ihe m ga-eme.
Ana m ekele gị nke ukwuu maka enyemaka gị na maka blọọgụ gị.
Emeghị m ya maka USB ma ọ bụ CD mana site na diski ike, ọ bụ naanị ka m banye ngosi nke lubuntu na windo. Kpamkpam, n'ihi na ekweghị m mee ihe ọ bụla.
Ihe m mere n'ikpeazụ bụ ịkpụzi site na windo nkebi ebe m nwere ubuntu (m tufuru mmemme niile, peeji echekwara na ndị ọzọ) wee tinye lubuntu site na ncha.
Izu ụka buru ibu mana enwere m olile anya na lubuntu ga-eme m nke ọma.
Daalụ nke ukwuu maka enyemaka na nlebara anya
Ndewonu! Daalụ maka itinye oge na isiokwu ndị a.
Banyere ihe m na-ahụghị enyemaka, ma ọ bụ na UNetbootin peeji nke, ọ bụ banyere ọnọdụ nke eriri nwere ike ịbụ na mbụ, ka m kọwaa, ihe na-eme ma ọ bụrụ na ọkara n'ime ya nwere data ma otu chọrọ iji ọkara ọzọ tinye chọrọ distro? Ọ bụrụ na nke ahụ ga-ekwe omume, olee otu mmadụ ga-esi banye data? ma ọ bụ ga-ikwommiri nke arụnyere distro ga-triggered mgbe ọ bụla ọ na-ejikọ?
Mgbe arụnyere nkesa Linux na USB ọ na-ekepụta buut, gbanwee na nkewa ụlọ? You nwere ike iji nnukwu eriri, kwuo 8 Gb ma ọ bụ 16 Gb, maka ọgba aghara abụọ na-eji otu mmemme?
N'ikpeazụ, na n'ihi ọchịchọ ịmata ihe n'ihi na Manjaro nwere onye nduzi ya, gịnị kpatara na UNetbootin agaghị arụ ọrụ maka Manjaro? 🙂 Ma ọ dịkarịa ala, echere m azịza nye ajụjụ mbụ, daalụ.
manjaro enweghị ike iji usoro a, ejiri dd ma ọ bụ gbaa ya na onye na-ese ihe
Zaghachi Elhuerto Delfer
tonny kl dijo
Ọ bụrụ na m nwere faịlụ ndị ọzọ echekwara na USB, enwere m ihichapụ ha ma ọ bụ enwere m ike ịchekwa onyonyo a na-enweghị ịhazi USB?
Nzaghachi to tonny crl
Mba. Have ga-eme ihe isiokwu ahụ kwuru. Ọ dịghị ihe ọzọ.
hey mgbe emechara eriri bootable, maka ya buut faịlụ m ga -ewepu ihe oyiyi Linux?
Mba ọ nweghị ike ịme…
Ọ bụrụ na ọ dị nfe ahụ, ị ​​gaghị achọ Unetbootin.
Ihe mmemme a na-eme bụ mepụta ọtụtụ faịlụ nhazi na akpaghị aka ka ị nwee ike bido sistemụ ahụ n’enweghị nsogbu.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị, ana m akwado ka ị gaa na ibe ndị a: http://unetbootin.sourceforge.net/ http://es.wikipedia.org/wiki/UNetbootin
na ya nwere ike mere site unzipping mbiet ke kpọmkwem eriri (na mbụ…) na-enweghị iji UNetBootin?? (o doro anya na configuring buut si eriri))
Kedu ihe UnetBootin na-eme na pendrive? na-e copomi faịlụ site na unzipped iso image ...
Ndewo. Enweghị m ike ịwụnye Unetbootin ma site na Synaptis ma ọ bụ site na weebụ. Enwetara m ozi njehie banyere faịlụ ihe dịka nke a> 4.3.3
M ga-esi na nsogbu a mgbe niile mgbe booting si USB:
SYS LINUX 4.07 EDD 2013-07-25 Nwebiisinka (C) 1994-2013 H. Peter Anvin et al
Agbalịrị m mmemme dị iche iche 300 iji bulie nkesa .iso na USB ma enwere m njehie na ha niile. Enwere m Acer Aspire One na enweghị m ike ịwụnye linux mana ọ bụ na USB.
Achọrọ m ozi na weebụsaịtị a:
Ọ naghị edozi m nsogbu ahụ.
Lee, ihe kachasị dịrị nchebe bụ iji iwu dd site na njedebe iji nyefee ISO na pendrive, ọ dị mfe ịgbaso usoro http://aprenderconlibertad.blogspot.com/2014/06/crear-facilmente-un-pendrive-booteable.html
Daalụ nke ukwuu maka enyemaka .. Enwere m ike ịwụnye ya n'enweghị nsogbu ..
ezigbo nwoke mechara m hu ya ekele
Nke a bụ ajụjụ mbụ / ụlọ akwụkwọ ọta akara site na neophyte?
1) Amaghim ihe “ISO” bu / putara
2) Ikwesiri wedata onyogho / igwe enyo?
3) Gịnị bụ "unetbootin" maka; ….
Enwere m mmeghe
SYSLINUX 4.07 EDD 2013-07-25 Nwebiisinka (C) 1994-2013 H. Peter Anvin et al
NJR:: Enweghị faịlụ nhazi ọ bụla
Enweghị ntuziaka nhazi ma ọ bụ UI achọtara!
Agbalịrị m ndụmọdụ dị iche iche, ọ naghị arụ ọrụ maka Olidata L51II0 na 80 GB disk na 1Gb RAM.
Edekwara m diski ahụ dị ka mpụga site na ubuntu a ka m nwee nkebi linux atọ dịnụ, mana naaa ten ihe a emebiwo m…. Onwere onye mara ka esi edozi ya ka imecha nwunye USB nke ubuntu 12.04?
gbalịa ime ya site na diski m tụbara otu njehie mana mgbe m malitere ya na diski Ọ B IF Ọ B IT ỌRK M
Zaghachi nye HARASHIMA
Dịkwa mma. Adị m ọhụrụ na nke a. Anaghị m arụnyere windo dịka ọmụmaatụ na obere ubuntu 14.04. Ihe m choro ime bu nwalee ubuntu 14.04 site na pendrive. Ihe bụ nsogbu bụ na tupu m gbalịa, aghọtaghị m ntuziaka. M budata UNetBootin maka windosws ma chekwaa ya na mkpịsị odee yana onyonyo iso nke ubuntu 14.04. Ajuju a bu ihe ndi a, ekwesiri m ime ihe ozo tupu m bido inyocha ubuntu site na pendrive, ma obu na mmemme etinyere n'enweghi echichi, enwere m ike ibido zuru oke?
enyi ibido ịtọghe ihe ị ga-etinye ya na kọmpụta gị wee ghara ịnyefe ya na eriri gị ebe nke a abaghị uru ... wụnye ntinye na kọmputa gị mgbe nke ahụ dị n'okpuru họrọ iso image wee chọọ ihe oyiyi iso na mbụ ebudatara ma chekwaa na pc gị wee pịa kee ma kwupụta usoro mmemme a ga-eme ihe niile mgbe ọ gwara gị ka ị malitegharịa ị ga-enye ya ka ịnabata ma hazie kọmpụta gị iji bulie eriri na nke ahụ.
Abali oma, gbaghara m, abum ohuru na nke a.
Enwere m PC na Windows 7 ma ana m akwụ ụgwọ ugbu a ka edee ya maka nje.
O doro anya na nje ọzọ banyere ya n'ihi na ọ naghị ekwe ka m jikọọ na netwọk Wi-Fi n'ụlọ.
You nwere ike inye m ndụmọdụ ka m mee bootable USB ma wụnye Linux
Zaghachi carlos contreras
Ana m atụ aro ka ị gụọ "ntuziaka onye mbido anyị".
Enwere m nsogbu mgbe m na-agba kali Linux site na USB mgbe ị na-ebu I na-enweta syslinux 3.86 2010-04-01 EBIOS Copyright (C) 1994-2010 H. Peter Anvin et al
na site n'ebe ahụ ọ dịghị ihe na-eme ọbụlagodi na m wepu ma ọ bụ tinye eriri ya anaghị eburu m ga-echere ka batrị ahụ gwụ ka ọ na-arụ ọrụ na windo ị nwere ike iziga m email e103746156po@hotmail.com Gracias
Otu ihe ahụ na-eme m, ị nwee ike idozi nsogbu ahụ?
Nwere ike idozi ya, ọ na-emekwa m otu ihe ahụ?
Zaghachi Alejandro Z.
Nsogbu ya bu na o jiri uneboting ma na akwukwo nke kali Linux o na-ekwu na o gha aghaghi ibu ihe omume ozo nke m na-echetaghi ihe a na-akpo ya mana i nwere ike ile anya na official page nke kሊ Linux
Achọpụtara m na ozi a bara ezigbo uru, daalụ.
Zaghachi Carlos Torres
KEDU IHE M DI MGBE ISO KERNEL GWARA M IHE M GA-EME?
Enwere m nsogbu, enwere ike inyere m aka? Enwere m Linux 4.0 sistemụ arụmọrụ ma achọrọ m ịchekwa ya na ebe nchekwa USB.
Zaghachi ka eduin
Enweghị m ike ịwụnye linux. Agbalịrị m ma ubuntu ma na Linux mint na mbipute 64-bit na 32. Na nhazi ahụ anaghị m enweta ihuenyo na nhọrọ iji wụnye ya na sistemụ arụmọrụ ọzọ, naanị igbe nkebi pụtara ma ebe ọ na-akpọchi. enwerem sony netbook nwere i5 na windows 7.
Zaghachi Diana rojas
Daalụ maka inwe weebụsaịtị a
Anyi na asi gi, José Luis!
Ndewo, ị maara na m nwere HP Mini 210 nke na-eri isi m haha ​​m gbalịrị mmemme linux, yana unet, ultra iso n'etiti ndị ọzọ na enweghị m ike ịbanye buut dị ka onye na-ekwu, biputere ịmaliteghachi ihuenyo ahụ dị oji a gbajiri ntabi na ihe ọ bụla ọzọ na-eme, biko nyere aka !!!!
Ndewo Alejandro! M na-atụ aro ka ị bugharịa ajụjụ gị na blog.fromlinux.net.
Echefula ịkọwa nkọwa niile dị mkpa iji nyere gị aka.
Ezigbo ndị enyi m nwere njehie na canaima ọhụrụ ahụ, a na m agwa gị na enwere m pendrive na o nwere canaima 4.0 64-bit mana mgbe m bidoro na pendrive ihuenyo na-agbanyụ ma diski diski amalite, kedụ ihe m chọrọ enyemaka?
Zaghachi Jose David Bracho
Echere m na enweghi nkwekọrịta n'etiti aha nke post na ọdịnaya
Angel Camacaro kwuru dijo
Enwere m ike ịpụ na windo? Achọrọ m ịwụnye linux ọzọ na canaima nke etinyere na windo
Zaghachi Angel Camacaro
Site na Balena Etcher ihe niile ga - ekwe omume, maka m ọ bụ mmemme kachasị mma iji wụnye Linux distro.
Enwetara m blog nke na-akọwa usoro ntinye nke ọma, aga m ahapụ ya ebe a ma ọ bụrụ na enwere onye nwere mmasị: https://lareddelbit.ga/2020/01/04/como-instalar-cualquier-distribucion-linux-desde-un-usb/
Pandorga GNU / Linux: mmasị Brazil distro maka ụmụaka
EasyPeasy 1.6 RC dị: Ubuntu maka netbook gị